बुधबारको राशीफल : आज तपाईको दैनिकी कसरी बित्नेछ, हेर्नुस् राशीफल:: Artha Dabali
बुधबारको राशीफल : आज तपाईको दैनिकी कसरी बित्नेछ, हेर्नुस् राशीफल
आज वि.सं. २०७६ आषाढ ११ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१९ जुन २६ तारिख, । आषाढ कृष्ण नवमी, रेवती नक्षत्र ।
मनमा उदासिनता छाउनेछ । आम्दानीको बाटो असहज बन्न सक्छ । धन संग्रहमा बाधा छ । श्रममा काम र कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा लाभ हुनेछैन । दैनिक खर्च बढ्नेछ । परिवार वा छिमेकीको जिम्मेवारीले अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ । दिक्क र झर्कोलाग्दो यात्राको योग छ ।
व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन । शरीरमा स्फूर्ति र उमंगको कमी हुनेछ । मेष राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग सेतो व वैजनी र शुभ अंक ४ रहेको छ ।
स्वास्थ्यमा सामान्य असर पुग्दा उमंग र उत्साहको कमी हुनेछ । महत्वपूर्ण काममा ढिलासुस्ती हुनसक्छ । तर आत्मविश्वास र पराक्रममा कमी आउनेछैन । मन एक चित्त बनाएरर काम गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुनेछ ।
काम गर्ने जाँगर बढ्नेछ । सखुसमृद्धीमा वृद्धि हुनेछ । व्यापार र उद्योगधन्दा सामान्य छ । प्रशासनिक कामबाट टाढै वसेको राम्रो । सानातिना काममा अल्झिदा महत्वपूर्ण काम नबन्न सक्छ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग कालो शुभ अंक ३ रहेको छ ।
अरुलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ । परिवारबा सहयोग मिल्नेछ । मान्यजन र गूरुवर्गको विचारले प्रभावित तुल्याउनेछन् ।
पितृधनबाट विशेष फाइदा छ । व्यापारीहरुले मनग्ये कमाउन सक्छ । यद्यपि कमाएको धन रमाइलो र खानपानमा खर्च हुनसक्छ । आज भविष्यप्रति लक्षित गरी लगनी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । कामकाजीले श्रमको मूल्य पाउनेछन् । कर्मचारीले हाकिम खुशी पार्नेछन् । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रगं ध्वाँसे शुभ अंक ६ रहेको छ ।
अरुको भर नपरी आफ्ने बलवुताले गरेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । लामो दुरीको यात्रामा निस्कनु राम्रो हुँदैन । यात्राबाट सोचेजस्तो सफलता मिल्ने देखिदैन । धार्मिक गतिविध र दानपुण्यमा मन जान सक्छ । टाढा रहेको पर्यटकीय स्थल वा तीर्थको भ्रमण हुनसक्छ । कर्मचारी सन्तुष्ट हुने समय छ । घरममा पारिवारिक समस्या र अस्वस्थता देखिन सक्छ ।
विद्यार्थीहरुले आज लापरवाहि गर्नुहुँदैन । नत्र बौद्धिकता र ज्ञानको सहि उपयोग हुन सक्दैन । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग सेतो वा पहेलो र शुभ अंक ५ रहेको छ ।
मनमा अशान्ति र छटपटी हुने समय छ । प्रतिष्ठाको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । सानातिना र घरेलु कामकाजमा समय वित्नेछ । प्रत्येक काममा बाधा आउने र ढिलो सम्पादन हुने योग छ । स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउन सक्छ ।
लेनदेनमा विवाद हुनसक्छ । घरायासी सुखमा कमी देखिन्छ । कसैसँग व्यर्थमा वादविवाद पर्ने देखिन्छ । महत्वपूर्ण कामहरु आजलाई थाती राखेको राम्रो हुनेछ । सवारीसाधान हाक्दा र बाटो काटदा सचेत हुनुहोला । सिंह राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग कालो र शुभ अंक ८ रहेको छ ।
आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमता बढ्नेछ । रमाइलो र रमझमको समय छ । रसरंगको चाहाना पूरा हुने योग छ । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । मनोरञ्जनमा रमाउने दिन छ । मेवा मिष्ठान्न खान पाइनेछ ।
रमाइलो यात्रा हुने योग छ । व्यवसायमा साझेदारी गर्ने मसय छ । आर्थिक पक्ष सबल छ । परिवारमा रमाइलो वातावरण सिर्जना हुनेछ । साथीको सल्लाहले गरिएको कामले फाइदा दिलाउनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गुलाबी वा सिन्दुरे र शुभ अंक ७ रहेको छ ।
क्षमता प्रदर्शन गर्ने समय छ । रिसराग र क्रोध त्यागेको राम्रो । यद्यपि आज जुनसुकै काममा सफलता मिल्ने योग छ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । उत्सह र आत्मबल वृछि हुनेछ । व्यवसायिक स्थितीमा सुधार आउनेछ ।
तर आज हडबड र आवेशमा काम गर्दा भने विग्रन सक्छ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग हलुका सेतो र शुभ अंक ६ रहेको छ ।
मनमा निराशा छाए पनि वुद्धि खियाएर अघि बढे सफलता प्राप्त हुनेछ । आज बढी व्यस्त हुने समय छ । कुनै आवश्यक काम रोकिन सक्छ । व्यवसायीहरुले दौडधूपअनुसार सफलता प्राप्त गर्नेछन् ।
सन्तानपक्षबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । प्रेमसम्बन्ध निरस हुनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग हलुका नीलो वा हरियो र शुभ अंक १ रहेको छ ।
शुरुमा तनाव भए पनि हिम्मत र आत्मबलका साथ काम गर्ने मसय छ । दिन रमाइलोमा वित्नेछ । व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ । आफन्तहरुको सहयोग गर्नेछन् । मान्यजनको सुझावले फाइदा दिलाउनेछ ।
आजको लक्ष्य र योजनाहरुको बारेमा खुलेर छलफल गर्दा फाइदा हुनसक्छ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग रातो वा पहेलो र शुभ अंक ५ रहेको छ ।
पराक्रम प्रदर्शन गरी काम गर्ने समय छ । परोपकारी र दानपुण्यको कामले रोकिएको काम बन्न सक्छ । तीर्थस्थल वा मन्दिरको भ्रमण वा दर्शन गर्दा मनमा शान्ति छाउनेछ । प्रतिष्ठा मान सम्मान आदि पाइनेछ ।
परिवारजनसँग आत्मियता बढ्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिएला । कामबाट पनि फुर्सद पाइएला । प्रशंसकहरु बढ्नेछ । आत्मश्विास बढ्नेछ । स्वादिष्ट भोजनको अवसर आउनेछट । व्यापारीहरुको समय राम्रो छ । प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । अध्यनयमा प्रगति हुनेछ । राम्रो नतिजा हात पार्ने समय छ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग गाढा नीलो र शुभ अंक ९ रहेको छ ।
दिन मध्यम छ । आर्थिक पक्ष राम्रो भए पनि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न खट्नु पर्ने छ । पारिवारिक किचलोले दिक्क लाग्नेछ । अध्ययनमा समय दिन सकिदैन । प्राविधिक कारणले आएका समस्या समाधान गर्न समय लाग्नेछ ।
आत्मबलमा कमी हुनेछ । काममा सोचेजति सफलता प्राप्त हुन सक्दैन । आफन्तहरु टाढिनेछन् । बोलीवचनमा नियन्त्रण गरेको राम्रो हुन्छ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग घिउ रंग र शुभ अंक २ रहेको छ ।
जोशजाँगर पलाउनेछ । मन प्रशन्न रहनेछ । सहयोगीहरुले साथ दिनेछन् । रोकिएको काम बन्नेछ । बोलीको भरमा कम बनन्ेछ । नयाँ काम बन्न सक्छ । विचार र दर्शनको बलमा धेरैलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ ।
अन्न र फलफूल जस्ता कृषिजन्य फलफूलबाट फाइदा छ । आँटेको काम बन्नेछ । नाम, दाम र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । शुभ रंग सिन्दुरे रातो र शुभ अंक ५ रहेको छ ।